Xaaliyaanii: Balaan konkolaataa lubbuu Afriikaaanota 12 galaafate - BBC News Afaan Oromoo
Xaaliyaanii: Balaan konkolaataa lubbuu Afriikaaanota 12 galaafate
Lammiilee Afriikaa akka kanaa baayyeen Kibba Xaaliyaanii keessa jireenya iyyummaa jiraachaa jiru.
Balaa konkoolaataa Kibba Xaaliyaan naannoo Fogiyaa dhiheenya Lesinaatti qaqabeen hojjattoonni guyyaa lammiilee Afriikaa ta'an 12 lubbuusaanii dhabaniiru.
Hojjattoonni kunneenis wayita balaan kun qaqqabeetti konkolaataa lakkoofsa gabatee Buligaariyaa qabu tokkoon lafa hojiitii gara manasaanii deebi'aa turan.
Kanneen lubbuunsaanii darbee malee konkolaachisaa dabalatee namoonni sadii miidhamuunsaanii barameera.
Kana malees balaa konkolaataa guyyaa Sanbataa qaqqabeen baqattoonni hojii qonnaa hojjataa turan afur naannoodhuma kanatti ajjeefamaniiru. Hojjattoonni yeroo Xaaliyaan keessatti minideefamanis kanfaltii baayyee gadaanaa akka argatan barameera.
Erga balaan guyyaa Sanbataa qaqqabeen boodas waldaan gamtaa hojjattoota qonnaa guyyaa Roobitiif mormii ''Jibbaa Diimaa'' Fogiyaaf jedhuun lammiilee lubbunsaanii darbee arfaniif du'aniif kabaja agarsiisuuf waamee ture.
Kanfaltiin isaan argatanis timaatimii kg 100 tokko funaanuuf kanfaltii Yuroo tokko xinnaata.
Motummaan namoota daddabarsaa baqattootaa karaa Libiyaatiin taasifamaa jiru dhaabuuf yaalu illeen, haalli baqattoota lammiilee Afriikaa Xaaliyaan keessatti argamanis baayyee yaachiisaadha.
Fakkeenyaaf baruma kana keessa bidiruun namoota 1,500 fe'uun Libiyaarraa galaana Meditiraaniyaan qaxxaamuruuf yaalte tokko galaanichatti dhidhimuushee, Ejansiin kolugaltoota motummoota gamtoomanii himeera.
Kana malees baqattoonni 650,00 baayyeen isaanii kan lammiilee Afriikaa Saahaaraan gadii irraa ta'an erga bata 2014tti Xaaliyaanii qaqbanii booda hojii dhabiinsa olaanaan rakkataa jiru.